“ကျွန်မတို့ လင်မယားက ဒလံ ဆိုရင် အခုလို ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခံရ ပါ့မလားရှင် ” ဆိုပြီး စွပ်စွဲ နေတာ တွေကို ဖြေရှင်းလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Oscar
ပရိသတ်ကြီးရေ … မင်းသမီးချော သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသု တို့ ဇနီး မောင်နှံဟာ ဆိုရင် လူထု လှုပ် ရှားမှုတွေကို ဖေဖော်ဝါရီ လပိုင်းကနေ စပြီး အခုချိန်ထိ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း ပါဝင်နေကြ သူတွေပဲဖြစ် ပါတယ်နော်။ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ များ ကြောင့် တိမ်းရှောင် နေရ ပေမဲ့ လည်း နေ့စဉ် ရက်ဆက် သတင်း အချက် လက်တွေကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာကနေ တစ်ဆင့်မျှဝေ ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ခုလိုမျိုး တိမ်းရှောင် နေတဲ့ အတောအတွင်း မှာလဲ သူမတို့ ဇနီးမောင်နှံနဲ့ ပတ် သက်ပြီး ကောလာ ဟာလများစွာ ထွက်ရှိ နေ တာ ကြောင့် သူမရဲ့ Facebook အ ကောင့် ကနေ ပြန် လည် ဖြေရှင်း ပြောခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တ ယ် နော်။
အခြေ အမြစ် မရှိတဲ့ page နဲ့ website မှာ ပိုင်ဖြိုးသုက ပြောကြားလာ ပါတယ် ဆိုပြီးတင်ထားတဲ့ သတင်းတွေ့ လိုက်လို့ပါ … သူရေးထား တာ ကလည်း တကယ်ကို ယုံလောက် စရာ အကွ က် ကျကျ ဇာတ်လမ်း ဆင်ရေးထား တာပါ အခုဒီမှာအဲဒီ့ interview ရဲ့ link ကို မထည့် ပေးဘူးဆိုတာ ကျွန်မထည့် ပေးလိုက်မှ အဲဒီ့ page အခုထက် reach ကောင်းသွားမှာ စိုးလို့ပါ… (လက်ရှိတောင် သူ့ post က share 5.7K) ရည်ရွယ် ချက်ရှိရှိနဲ့ကို ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ် စေ မယ့်ခေါင်း စဉ်တပ် ရေးထား တာပါ…။ အဲဒီ့ post အောက်မှာ ဝိုင်းဝန်း စွပ်စွဲ ပြောဆိုထား သူများကို လည်းမေးချင် လို့ပါရှင် ကျွန်မတို့ လင်မယားက ဒလန် တွေဆိုရင် ဝရမ်းထုတ် ခံရပါ့မလား ??? ကျွန်မတို့သာ အမှန်တရား ဘက်က မရပ်တည် ချင်ရင် အသာလေး ရေလိုက်ငါးလိုက် ရေသာခို နေကြမှာပေါ့ရှင် …။ (အဲ့သလို နေနေကြ သူတွေလည်း
ရှိနေတာပဲ) အများစိတ် ဆင်းရဲနေ ရချိန်မှာ ကိုယ့်ဒုက္ခ တွေမဝေမျှ ချင်ပေမယ့် ဒီတစ်ခုတော့ အတိ အကျ ကျွန်မပြော ပါရစေ။ ကျွန်မ ပိုင်ဖြိုးသု သ ည် မည်သည့် အသွင်ပြောင်း media အတု page အတုကိုမျှ interview ဖြေကြားထား ခြင်းမရှိပါ… အရေးတော်ပုံ ကြီးအောင်မှ ဝရမ်းပြေးဘဝအ တွေ့ကြုံ များဆိုပြီး တစ်ရက် သက်သက် ပြောပြရဦးမယ်….” ဆိုပြီး လက်ရှိ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ကောလ ဟာလ သတင်းအတု တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြန် လ ည်ဖြေရှင်း လာတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ လည်းသိရှိစေရန် အတွက် တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူတ င် ဆက် ပေးလိုက် ရပါတယ် နော်။ ဖတ်ရှု ပေးတဲ့ပရိတ် သတ်ကြီးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင် ရှိပါတ ယ်နော်..။
ပရိသတျကွီးရေ … မငျးသမီးခြော သရုပျဆောငျ ပိုငျဖွိုးသု တို့ ဇနီး မောငျနှံဟာ ဆိုရငျ လူထု လှုပျ ရှားမှုတှကေို ဖဖေျောဝါရီ လပိုငျးကနေ စပွီး အခုခြိနျထိ တကျကွှစှာ ပူးပေါငျး ပါဝငျနကွေ သူတှပေဲဖွဈ ပါတယျနျော။ လကျရှိ ဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနေ မြား ကွောငျ့ တိမျးရှောငျ နရေ ပမေဲ့ လညျး နစေ့ဉျ ရကျဆကျ သတငျး အခကျြ လကျတှကေို သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာကနေ တဈဆငျ့မြှဝေ ပေးလေ့ ရှိပါတယျ။ ခုလိုမြိုး တိမျးရှောငျ နတေဲ့ အတောအတှငျး မှာလဲ သူမတို့ ဇနီးမောငျနှံနဲ့ ပတျ သကျပွီး ကောလာ ဟာလမြားစှာ ထှကျရှိ နေ တာ ကွောငျ့ သူမရဲ့ Facebook အ ကောငျ့ ကနေ ပွနျ လညျ ဖွရှေငျး ပွောခဲ့တာပဲ ဖွဈပါ တ ယျ နျော။
အခွေ အမွဈ မရှိတဲ့ page နဲ့ website မှာ ပိုငျဖွိုးသုက ပွောကွားလာ ပါတယျ ဆိုပွီးတငျထားတဲ့ သတငျးတှေ့ လိုကျလို့ပါ … သူရေးထား တာ ကလညျး တကယျကို ယုံလောကျ စရာ အကှ ကျ ကကြ ဇာတျလမျး ဆငျရေးထား တာပါ အခုဒီမှာအဲဒီ့ interview ရဲ့ link ကို မထညျ့ ပေးဘူးဆိုတာ ကြှနျမထညျ့ ပေးလိုကျမှ အဲဒီ့ page အခုထကျ reach ကောငျးသှားမှာ စိုးလို့ပါ… (လကျရှိတောငျ သူ့ post က share 5.7K) ရညျရှယျ ခကျြရှိရှိနဲ့ကို ထငျယောငျ ထငျမှားဖွဈ စေ မယျ့ခေါငျး စဉျတပျ ရေးထား တာပါ…။ အဲဒီ့ post အောကျမှာ ဝိုငျးဝနျး စှပျစှဲ ပွောဆိုထား သူမြားကို လညျးမေးခငျြ လို့ပါရှငျ ကြှနျမတို့ လငျမယားက ဒလနျ တှဆေိုရငျ ဝရမျးထုတျ ခံရပါ့မလား ??? ကြှနျမတို့သာ အမှနျတရား ဘကျက မရပျတညျ ခငျြရငျ အသာလေး ရလေိုကျငါးလိုကျ ရသောခို နကွေမှာပေါ့ရှငျ …။ (အဲ့သလို နနေကွေ သူတှလေညျး
ရှိနတောပဲ) အမြားစိတျ ဆငျးရဲနေ ရခြိနျမှာ ကိုယျ့ဒုက်ခ တှမေဝမြှေ ခငျြပမေယျ့ ဒီတဈခုတော့ အတိ အကြ ကြှနျမပွော ပါရစေ။ ကြှနျမ ပိုငျဖွိုးသု သ ညျ မညျသညျ့ အသှငျပွောငျး media အတု page အတုကိုမြှ interview ဖွကွေားထား ခွငျးမရှိပါ… အရေးတျောပုံ ကွီးအောငျမှ ဝရမျးပွေးဘဝအ တှကွေုံ့ မြားဆိုပွီး တဈရကျ သကျသကျ ပွောပွရဦးမယျ….” ဆိုပွီး လကျရှိ ပွနျ့နှံ့နတေဲ့ ကောလ ဟာလ သတငျးအတု တှနေဲ့ပတျသတျပွီး ပွနျ လ ညျဖွရှေငျး လာတာကွောငျ့ ပရိသတျတှေ လညျးသိရှိစရေနျ အတှကျ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ ကူးယူတ ငျ ဆကျ ပေးလိုကျ ရပါတယျ နျော။ ဖတျရှု ပေးတဲ့ပရိတျ သတျကွီးကို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျ ရှိပါတ ယျနျော..။